Ukuchitha inkcitho kumajelo eendaba ezentlalo ngokwe-Fortune CMOs
Inkcitho kwiMithombo yeendaba kuLuntu ukunyusa i-18% + kwiminyaka emi-5
NgoLwesibini, Februwari 15, 2011 NgeCawa, Oktobha 19, 2014 Douglas Karr
The Uphando lweCMO iqokelela kwaye isasaze izimvo zabarhwebi abaphezulu ngenjongo yokuqikelela ikamva leemarike, ukulandelela ukugqwesa kwezentengiso, kunye nokuphucula ixabiso lentengiso kumashishini nakuluntu.
Isilayidi esiphambili, esithi Ukuthengisa iPilgrim kukhankanyiwe, kulindelwe kwinkcitho yeendaba zosasazo… ukukhula okungaguquguqukiyo kuxhaswa ngamandla ngaphakathi kuphando.
Yasekwa ngo-Agasti 2008, The Uphando lweCMO ilawulwa kabini ngonyaka kusetyenziswa uphando lwe-Intanethi. Imibuzo iyaphinda ngokuhamba kwexesha ukuze imikhwa ibonakale. Kwaziswa izihloko ezizodwa kuvavanyo ngalunye- Olu lawulo lwesi-6.
tags: 2011Ucwaningo lwe-cmoImidiya yokuncokolainkcitho kwimidiya yoluntu
Uzifumana njani izimvo zebhlog usebenzisa uGoogle
Ngubani oluthandayo uVillain weNtengiso ye-Injini yakho?